मोदीको भाषण प्रभावकारी हुनुको रहस्य | BLOGSTREET
कैयौं अमेरिकीमा आशा र भरोसाको संचार गर्न सफल त्यो भाषणको तयारीमा ओबामाले महिनौं लगाएको जानकारहरु बताउँछन् । भाषणकै तयारीका लागि उनले आफ्ना अरू काम छोडेर कैयौं रात होटलमा बिताएकी जे न्युटन स्मलले ‘टाइम’ पत्रिकामा उल्लेख गरेकी छन् । ओबामाले विभिन्न समयमा दिएका भाषणमा पनि उनले उत्तिकै मेहनत गर्नेगरेका थिए । त्यसबाहेक उनका सल्लाहकार र विज्ञ समूहको सहयोग त थियो नै । पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले पनि आफ्नो भाषण आफैँ लेख्ने गरेको उनका निकटहरू बताउँछन् ।
हाम्रो सन्दर्भमा भने यस्तो प्रभावकारी भाषणकला भएका नेता कमै छन् । हुन त समय समयमा हाम्रा ठूलाठूला नेता र युवा नेताको भाषण कलाको हामीले प्रशंसा नगरेका होइनौ । तर, हरेक भाषणमा उत्तिकै ओज, विषय र तथ्यमा उत्तिकै गाम्भीर्य, स्वाभाविक र ‘करिस्म्याटिक’ शैली अनि उत्तिकै आकर्षक भावभङ्गीमा भएका नेता सम्भवत: एसियामै कमै छन् । छन् भने पिन उनीहरू ठाउँमा पुग्नसकेका छैनन् । हुन त सामियक नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली, नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि आफ्नो भाषणका लागि काफी प्रशंसा बटुलेका छन् ।
के हो प्रम्प्टर ? यसबारे बुझ्न यो पढ्नुहोस् : किन कागजमा हेरेर भाषण गर्छन् हाम्रा प्रधानमन्त्री?
२०७५ बैशाख ३१ सोमबार बाह्रखरी डट कममा प्रकाशित
समारोहमा रुपेश श्रेष्ठ र सुनिता डंगोल उद्घोषकको भूमिकामा।
कार्यक्रम संचालकद्वय रुपेश र सुनितालाई अभिवादन गर्दै नरेन्द्र मोदी